होमपेज / विश्व / अमेरिका / भीसा प्रकरण : हिन्दु -मुस्लिम युद्धस्थल बन्दै अमेरिका
भीसा प्रकरण : हिन्दु -मुस्लिम युद्धस्थल बन्दै अमेरिका	24 Jul 2013 | 13:31pm बुधबार ९ श्रावण, २०७०
चिदानन्द राजघट/टीएनन	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
वासिङटन - अमेरिकाका राजनीतिज्ञहरु विभाजित नभएपनि भारतीय महाद्वीपबाट सुरु भएको हिन्दु र मुस्लिम विभेदले अमेरिकालाई नयाँ युद्धभूमि बनाएको छ। नियोजितरुपमा सार्वजनिक गरिएको ६५ भारतीय सांसदहरुको चिठी अहिले चर्चाको शिखरमा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामालाई सम्भवत मुस्लिम सांसदहरुले पठाएको पत्रमा गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकी भीसा नदिन उनीहरुले पत्राचार गरेका हुन्। २००२ मा भएको जातीय हिंसालाई बढाउने काम मोदीले गरेको आरोपमा उनलाई अमेरिकाले भीसा दिएको छैन। मुस्लिमहरु त्यो व्यवस्था कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन्।
'आन्तरिक मामिलामा पनि भारतले आफ्नो 'स्ट्यान्ड' लिन्छ जस्तो कि, अफ्रिकाको गैर स्वैत मुभमेन्ट। त्यसकारण यसमा राष्ट्रपति ओवामा किन सहभागी नहुने? जे भएपनि राजनाथ सिंह अमेरिमा एउटा इस्यू लिएर आएका छन्, मोदीका लागि भीसाको भिक्षा मागिरहेका छन्,' इन्डियन माइनोरिटी एड्भोकेसी नेटवर्कका शिख उविदले भने। Tweet प्रतिक्रिया